Nesorina Tany Kenya Ny Dokambarotra Amin’ny TV Momba Ny Fimailo Taorian’ny Fitabataban’ny Mpino · Global Voices teny Malagasy
Nesorina Tany Kenya Ny Dokambarotra Amin'ny TV Momba Ny Fimailo Taorian'ny Fitabataban'ny Mpino
Voadika ny 26 Marsa 2013 0:30 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Français, አማርኛ, Italiano, Español, English
Nesorina tanatin'ireo fantsom-pampitam-baovao ny fanambarana iray ho an'ny tombotsoam-bahoaka entina hampiroboroboana ny fampiasana fimailo hiadiana amin'ny fiparitahan'ny tsimokaretina VIH sy ireo aretina hafa any Kenya, taorian'ny niterahan'ity dokambarotra TV ity hatezerana teny anivon'ireo mpitarika ara-pinoana ao amin'ny firenena.
Ilay dokambarotra, izay mampiseho vehivavy manome torohevitra ny namany iray efa manambady mba hampiasa fimailo raha miditra anatinà fiarahana ivelan'ny mariazy izy, dia notohanan'ny minisiteran'ny fahasalamana ao Kenya sy ireo masoivoho mpanohana any ivelany, ny USAid sy ny UKAid.
Nilaza tamin'ny BBC ny Minisitry ny Fahasalamana Kenyana Peter Cherutich fa natao io dokambarotra io noho ny fananan'ny maherin'ny 30 isanjato amin'ireo mpivady, olon-tiana ivelan'ny tokantranony. Araka ny tombatomban’ ny Firenena Mikambana dia manodidina ny 1,6 tapitrisa amin'ny mponina 41,6 tapitrisa ao Kenya no miaina miaraka amin'ny VIH.
Miampanga io dokambarotra io ho mampirisika ny fandrafesana ireo diakona Kristiana sy Silamo.
Na dia nesorina tao amin'ny TV aza io dokambarotra io, mbola hita ao amin'ny YouTube:
Niantso io fanambaràna ho an'ny tombotsoam-bahoaka io ho “marim-pototra” ny mpitoraka bilaogy The Squared Factor tao anatinà lahatsoratra antsoina hoe “Sikio la kufa halisikii Condom” [sw]. Ilay lohateny, izay manakaikikaiky ny dikateny hoe “ny sofina maty tsy mamaly fimailo”, dia lalaon-teny amin'ny ohabolana “ny sofina maty tsy mamaly fanafody”:
Tsy hihodinkodinako ny resaka. Ity resaka mpango wa kando [raharaha momba ny fiarahana ivelan'ny fanambadiana] ity. Ary manao fijery tezitra ho an'ireo nangataka ny nanesorana ilay dokambarotra farany tao amin'ny TV mitondra ny lohateny hoe weka condom mpangoni [mampiasà fimailo rehefa manao firaisana ivelan'ny fanambadiana], tsy halefa amin'ny haino aman-jery intsony.
Nahakita faritra saropady teo anivon'ny fiatahamonina ny hafatra nampitain'ity dokambarotra ity: raha tsy afaka mifehy tena ianao na maka ho vady ny olona miaraka aminao, mampiasà fimailo raha miahy ireo olon-tianao ianao. Ny fiahiana amin'ity tranga iray ity dia fisorohana ny vohoka alohan'ny fanambadiana, sy ny karazan'ny IST- anivon'ireny ny VIH sy ireo fiantraikany ratsy aterany eo amin'ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina iray manontolo.
Nirohotra nankao amin'ny Twitter ny Kenyana hiady hevitra momba io dokambarotry ny TV io teo ambanin'ny tenifototra #CondomMpangoni, ary samy betsaka na ny mpomba na ny mpanohitra.
Nanoratra i “victor-MUFC” (‏@victorbmc) hoe tsy tiany io dokambarotra io:
‏@victorbmc: maharikoriko ilay dokambarotra RT @MacOtani: Oaooo koa satria efa nesorina tamin'ny fahitalavitsika ilay dokambarotra #CondomMpangoni dia lavitry ny loza izany isika ah?! #SwalaNyeti
Nilaza tamin'ireo Kenyana izay nanohitra io dokambarotra io hiatrika ny zava-misy marina i Mathias Ndeta (‏@MNdeta):
‏@MNdeta: Raha ny hevitro dia tokony hijanona amin'ny toerany io dokambarotra #CondomMpangoni io, mpaminavina fotsiny ihany ireo manohitra izany, ndeha isika hiatrika ny zava-misy marina.
Nampitandrina i “z’ Ghost Buster” (‏@TheMumBi) :
‏@TheMumBi: Nasitritsika ela loatra tanatin'ny fasika ny lohantsika. Amena, ho an'ny dokambarotra #CondomMpangoni ..nahatonga antsika niresaka ny zavatra sorohantsika tsy ho resahana.
Nitsikera i Paul (‏@M45Paul) fa vao mainka nampiroborobo ilay dokambarotra ny fanapahan-kevitra hanaisotra azy:
‏@M45Paul: Vao mainka mampiely azy noho izay tokony ho izy ny fandraràna io dokambarotra #CondomMpangoni io tsy handeha.
Nanome sosokevitra i “Pastor Wa” (‏@Pastor_Wa):
‏@Pastor_Wa: Ary ho an'ny rehetra izay mijery iny dokambarotra iny, tokony voadona ny hambom-ponao ka hilaza, ‘mbola mendrika noho izao aho’ #CondomMpangoni
Nanontany i “Kizzy K*” (‏@boobykizzy):
‏@boobykizzy: #condommpangoni =>Inona no nanjo [sic] ny fahamendrehana, ny foto-pisainana sy ny tariny? tokony hosaziana ve ny media? tokony hovahantsika ve ity olana ity?
Ary farany, nanamarika i “AverageKenyan” (‏@AverageKenyan):
‏@AverageKenyan: #Condommpangoni, tsy mandà isika, tsy mahazaka ny fanambarana ampahibemaso ny fanitsakitsahana tokantrano ny lasitra sarotry ny fiaraha-monina Afrikana na dia izany aza no zava-misy ho an'ny ankamaroany